लेखकहरु, लेखन र साहित्य मा 36 विचारहरु वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु
यो नजिकिंदै पुस्तक को दिन। Yलेखक बिना किताब के हो? ती लेखकहरूको विचारविना साहित्य के हो? तपाईंको विचारहरू, तपाईंको कल्पनाशक्ति, तपाईंका भ्रमहरू र सपनाहरू, तपाईंको आशाहरू, तपाईंको ब्लकहरू, तपाईंको उपलब्धिहरू र तपाईंको असफलताहरू। साहित्यिक सिर्जनाको प्रत्येक पक्ष, पेशाको बारेमा प्रत्येक विचार वा हरेक परिभाषा त्यो लेखकको लागि अद्वितीय छ।
यहाँ ती मध्ये are 36 छन् जुन हामी साझेदारी गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं, तर त्यसले पक्कै हामीलाई सोच्न बाध्य पार्छ। कि हैन। तिनीहरूलाई हेरौं। म बिल एडलर, अल्फ्रेडो कोन्डे, मनुएल डेल आर्कोको साथ बस्छु, जेसिस फर्नांडीज सान्तोस, जुलियन ग्रीन र एडिलेडा गार्सिया मोरालेस
लेखन संसारको सबैभन्दा एक्लो काम हो - बिल adler.
प्रत्येक लेखकले आफूलाई असन्तुष्टि वा नराम्रोको लागि क्षतिपूर्ति दिन्छ, आर्थर आडोमभ.
साहित्य, यसको आफ्नै स्वभावले, हिजोको धारणा र आजको प्लेटिटुड्समाथि प्रश्न गर्न बाध्य छ -रोबर्ट मार्टिन एडम्स.
लेखन मेरो लागि क्रोकेटि like जस्तो हो: मँ सँधै डराउँछु कि मैले एउटा कुरा बिर्सिन पनि - Isabel Allende.
एउटा पृष्ठले मलाई धेरै समय लगायो। दुई पृष्ठ एक दिन राम्रो छ। तीन पृष्ठहरू शानदार छ - किंग्सली विलियम एमीस.
त्यहाँ धेरै छन् जसले राम्रा लेखेका छन् केही पनि भन्न को लागी - फ्रान्सिस्को आयला.
एकचोटि तपाईले व्याकरण सिकेपछि, लेख्नु भनेको केवल कागजमा कुरा गर्नु हो र उहि समयमा के भन्नु हुँदैन भनेर सिक्दैछु - बेरेल बेनब्रिज.
बरु मलाई लाग्छ कि तपाईं के लेख्नुहुन्छ त्यसबाट सोच्नुहुन्छ अन्य तरिकाले होइन - लुई अरेगन.
गाह्रो कुरा लेख्नु होइन, वास्तवमै गाह्रो कुरा पढ्नु हो - मानुएल डेल आर्को.
युद्ध र शान्ति यसले मलाई बिरामी पार्छ किनकि म यो आफैं लेख्दिन, र अझै नराम्रो पनि, म सक्षम हुने छैन - जेफ्री एच। आर्चर.
प्रत्येक लेखकले आफ्ना पूर्ववर्तीहरू सिर्जना गर्दछ - जर्ज लुइस बोर्जेस.
लेखकलाई कुनै पनि हिसाबले प्रमाणपत्रले परिभाषित गर्दैन, तर ऊ के लेख्छ - मिखाइल अफानासेविच बुल्गाकोभ.
साहित्यिक गुणवत्ता पाठको स number्ख्याको विपरित आनुपातिक हुन्छ - जुआन बेनेट.
पुस्तक समाप्त गर्नु भनेको बच्चालाई बाहिर लगेर गोली हान्नु जस्तै हो - Truman Capote.
साहित्य यस्तै अनन्त हुन सक्छ, तर भावनाहरूले यसलाई जन्म दिँदैन - पियरे ब्लांचर.
लेखक हुनु भनेको मृत्युबाट जीवन चोर्नु हो - अल्फ्रेडो कोन्डे.
जो साहित्यको पागल मास्कको साथ जीवन परिवर्तन गर्न चाहन्छ तिनीहरू झूठ - क्यामिलो जोसे सेला.
जबसम्म विचार विद्यमान हुन्छ, शब्दहरू जीवित छन् र साहित्यहरू भाग्न सकिन्छ, बाट होइन तर जीवनतर्फ - सिरिल कनोली.
राम्रोसँग लेख्ने लेखक इतिहासको आर्किटेक्ट हो - जोन डोस पास्कोस.
असामान्य धेरै सानो प्रतिशतमा फेला पर्दछ, साहित्यिक सिर्जना बाहेक, र यो संक्षिप्त रूपमा साहित्यको सार हो - जूलियो कर्त्ताजार.
लेखकको दुर्गम इरादा र पाठकको बहस गर्ने उद्देश्यको बीचमा पाठको पारदर्शी अभिप्राय हो जुन एक अस्थिर व्याख्यालाई खण्डन गर्दछ - उम्बर्टो इको.
लेखक बन्ने तीन कारणहरू छन्: किनकि तपाईंलाई पैसा चाहिन्छ; किनकि तपाईसँग केहि भन्नु छ कि संसारले थाहा पाउनुपर्दछ; र किनभने तपाईलाई दिउँसो दिउँसो के गर्ने थाहा छैन - Quentin कुरकुरा.
यदि त्यहाँ अमर लेखक मात्र थिए भने साहित्य एकदम तनावपूर्ण हुनेछ। हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको जस्तो लिनु पर्छ, र उनीहरूले अन्तिममा राख्नु हुँदैन - ओलिभर एडवर्ड्स.
लेखकलाई अभियोजन वा बचावको लागि साक्षीसँग तुलना गर्न सकिन्छ, किनकि अदालतमा साक्षीले जस्तै उसले अरू केहीबाट भाग्न सक्ने केहि चीजहरू बुझ्छ - इल्या एरेनबर्ग.
शैतानले साहित्य र जीवनमा एक आवश्यक तत्व हो; यदि जीवन निष्कासित भयो भने यो दु: खी हुनेछ, अनन्तसम्मको दुई ध्रुव बीच स्लाइडिंग, र साहित्य मात्र दु: खको भजन मात्र हुनेछ - उमर फखुरी.
लेखक हस्तिहाड टावरमा रिटायर हुँदैन, तर डाइनामाइट कारखानामा - अधिकतम फ्रिस्च.
उदाहरणहरू लिने र अस्वीकार गर्ने, उनीहरूको आत्मको बलमा उनीहरूमाथि विजय हासिल गर्ने, यस्तो एक व्यवसायको साथ लेखकको गतिविधि हो - कन्स्टान्टिन फेडाइन.
जब तपाईं लेख्नुहुन्छ, तपाईंको आकारमा विश्व देखाउनुहोस् - येशू फर्नांडीज सान्तोस.
जब म लेख्छु, मँ केहि निश्चितताहरू पुन: प्राप्ति गर्न चाहन्छु जसले मानिसहरूलाई बाँच्न र अरूलाई हेर्न मद्दत गर्दछ - एडुआर्डो गैलेनो.
म पाठकहरूको ठूलो संख्याको लागि खोजिरहेको छैन, तर पाठकहरूको निश्चित संख्यामा - जुआन गोयतिसोलो.
शेक्सपियरको बारेमा उल्लेखनीय कुरा यो हो कि यो वास्तवमै धेरै राम्रो छ, सबै व्यक्ति जो यसलाई यो भन्छन् एकदम राम्रो छ - रोबर्ट ग्रेभ्स.
सोच्ने उडाहरू र शब्दहरू पैदल हिड्दछन्। लेखकको नाटक हेर्नुहोस् - जुलियन ग्रीन.
लेखकले आफ्नो पुस्तकहरू बेच्नको लागि केवल सभ्य कुरा मात्र उनीहरूलाई राम्रोसँग लेख्न सक्छ - गेब्रियल गार्सिया मराक्वेज.
लेखकको लागि सफलता सधैं अस्थायी हुन्छ, यो सँधै असफल हुन्छ - ग्राहम ग्रीन.
लेखनको प्रक्रियामा कल्पना र मेमोरी कन्फ्युज हुन्छन् - एडिलेडा गार्सिया मोरालेस.
केही लेखकहरू अर्को लेखकलाई एउटा वाक्य लेख्न मद्दत गर्न जन्मेका हुन्छन्। तर लेखक क्लासिकबाट सिक्न सक्दैन जुन उसको अघि थियो - अर्नेस्ट हेमिंगवे.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » लेखकहरु, लेखन, र साहित्य मा 36 विचारहरु